ကိုအရိပ် | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: ကိုအရိပ်
နယူးယောက် မိုင်းတွင်း အဖြစ်ဆိုး (ကိုအရိပ်)
နာရီပေါင်းများစွာ သူတို့စောင့်နေခဲ့ကြတယ်။ အမှောင်ထုထဲမှာ တကယ့်အဖြစ်မှန်ဟာ တဖြည်းဖြည်း အရည်ပျော်ဆင်းလို့။ အရာရာတိုင်းဟာ လွန်ခဲ့သော ကာလများစွာက ဟိုးအဝေးကြီးက ကမ္ဘာတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလိုလို ခံစားရစပြုလာကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အနာဂတ်ကာလတစ်ခုရဲ့ သီးခြားကမ္ဘာတစ်ခုမှာပဲ ဖြစ်တော့မှာများလား။
New York Mining Disaster by Haruki Murakami (English Translation: Philip Gabriel).
ဘာသာပြန် – ကိုအရိပ်
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ကိုအရိပ်, ဘာသာပြန်, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, ၀တ္ထုတို, Haruki Murakami, lanolay, Short Stories | Permalink.
ဂျာမန်စိတ်ကူးယဉ် သုံးပုဒ် (ကိုအရိပ်)
ပြီးတော့လဲ ခင်ဗျားပြောသလို ပိုမြှင့်လိုက်ရင် လေပြင်းပြင်းတစ်ချက်ထဲ ကျုပ်တို့ လွင့်ပါသွားပြီး အရှေ့ဂျာမနီကို ရောက်မသွားဘူးလို့ ဘယ်လိုမှ အာမမခံနိုင်ဘူးဗျ။ အဲလိုသာဆိုရင် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။ ကျုပ်တို့ဟာ စပိုင်တွေပါဆိုပြီး အဖမ်းခံရကောင်း ခံရနိုင်တယ်။ တကယ်လို့ အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့ရင်တောင် အနောက်ဂျာမနီဖက်ကို ဘယ်လိုမှ ပြန်လာလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
Three German Fantasies by Haruki Murakami (English Translation: Keith Leslie Johnson).
မွေးနေ့ရှင် မိန်းကလေး (ကိုအရိပ်)
သူ ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲ ငြိမ်ကျသွားတယ်။ တောင်းဆုတစ်ဆု …။ လေအဝှေ့မှာ ပြတင်းမှန်ကို မိုးစက်တွေ မညီမညာ လာရိုက်တယ်။ သူ ငိုင်နေတဲ့ တစ်ချိန်လုံး အဖိုးအိုဟာ ဘာမှမပြောပဲ သူ့ မျက်လုံးတွေထဲကိုပဲ စိုက်ကြည့် နေခဲ့တယ်။ အချိန်ရဲ့ မညီမညာခုန်နှုန်းတွေဟာ သူ့နားထဲကို လာ လာ ရိုက်နေလေရဲ့။
“ကျမ ဆုတစ်ခုခု တောင်းရမယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒီ ဆုတောင်းဟာလဲ ပြည့်မယ်၊ အဲလိုလား …”
စားပွဲပေါ်မှာ လက်နှစ်ဖက်လုံး တင်ထားဆဲ အဖိုးအို ကတော့ သူ့ အမေးကို ပြန်မဖြေပဲ တစ်ချက် ပြုံးလိုက်တယ်။ အလှိုက်လှဲ အဖော်ရွေဆုံး အပြုံးမျိုး ပါပဲ။
ဘာသာပြန် – ကိုအရိပ် | Mirrored from: Moveable